Apple TV + tolotra iray taona maimaim-poana dia ahena ho telo volana | Avy amin'ny mac aho
Hatramin'izao, izay nividy ny iray amin'ireo fitaovana nofidian'i Apple dia nahazo ny fahafahany manana famandrihana herintaona amin'ny Apple TV + maimaim-poana. Raha nanao izany, ny orinasa dia nahasarika mpanjifa marobe mety handoa vola rehefa "mifamatotra" amin'ny andiany iray izy ireo. Tokony ho nieritreritra tsara momba ny paikady ara-barotra i Apple satria ny tolotra ahena ho telo volana izao.
Ireo mpividy fitaovana Apple dia hanohy handray fitsapana maimaim-poana ny Apple TV +, na izany aza, ny faharetan'io famandrihana maimaim-poana io dia hahena hatramin'ny herintaona ka hatramin'ny telo volana. Manomboka amin'ny 1 Jolay 2021, ireo mpampiasa mividy fitaovana Apple nofidian'i Apple dia hahazo Apple TV + telo volana maimaim-poana. Io no fanovana ankapobeny voalohany tamin'ny tolotra fitsapana hatramin'ny nanehoana azy niaraka tamin'ny fandefasana Apple TV + tany am-boalohany tamin'ny taona 2019.
Aorian'ny fitsapana dia mandoa ny sarany isam-bolana napetraka ny mpampiasa mba hiditra amin'ny atiny Apple original sy tsy original. Noho izany, mpampiasa nividy iPhones, iPads, na fitaovana Apple hafa rehefa natomboka ny Apple TV + Afaka nahita azy ireo maimaim-poana izy ireo hatramin'ny Novambra 2020 lasa teo.
Ankehitriny, nanitatra ity fampiroboroboana ity i Apple hatramin'ny febroary 2021. Noheverina fa nanao izany i Apple ka na ireo mpampiasa voalohany aza dia afaka nanaraka ny fitsarana maimaimpoana rehefa nanomboka nipoitra ny fizaran-taona faharoa tamin'ny fandaharana. Ny sasany amin'ireo mpamandrika voalohany dia efa navadika ho kinova karama. Manzana famerenam-bola navoaka ho an'ireo mpampiasa ireo.
Amin'izao fotoana izao ary fotoana fohy talohan'ny nifaranan'ny extension dia nanitatra azy io indray i Apple. Amin'ity indray mitoraka ity ny fotoam-pitsarana, na dia ho an'ireo mpanjifa voalohany aza, dia handray azy ireo hatramin'ny faran'ny volana Jona 2021. Heverinay fa tian'i Apple ny hanohizany mankafy ny Apple TV +, mety ho fomba iray hanomezana fahasoavana an'ireo mpanjifa manavao ny fitaovany izany isan-taona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple TV + tolotra maimaim-poana mandritra ny herintaona dia ahena ho telo volana